ASUR: Yevatakurwi traffic pasi pasi 44.9% muMexico, 41.5% muPuerto Rico uye 67.8% muColombia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » ASUR: Yevatakurwi traffic pasi pasi 44.9% muMexico, 41.5% muPuerto Rico uye 67.8% muColombia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Mexico News • Kuputsa Puerto Rico Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV ASUR, renyika dzakawanda nhandare yendege ine mashandiro muMexico, US neColombia, nhasi vazivisa kuti huwandu hwevapfuuri hweOctober 2020 hwakadzikira 50.1% kana zvichienzaniswa naGumiguru 2019. Traffic yevatakuri yakaderera 44.9% muMexico, 41.5% kuPuerto Rico uye 67.8% mu Colombia, yakakanganiswa nekuderera kwakanyanya mubhizinesi uye mafaro ezororo kubva kunjodzi yeCOVID-19.
Ichi chiziviso chinoratidza kuenzanisa pakati paGumiguru 1 kusvika Gumiguru 31, 2020 uye kubva Gumiguru 1 kusvika Gumiguru 31, 2019. Kufambisa pamwe nevazhinji vafambi vevatyairi vakasiyiwa kuMexico neColombia.
Gumiguru % Chg Gore kusvika nhasi % Chg
Mekisiko 2,478,834 1,365,772 (44.9) 28,262,695 12,914,498 (54.3)
Mudzimba Traffic 1,417,569 923,189 (34.9) 13,784,943 7,056,318 (48.8)
Mudzimba Traffic 595,129 374,669 (37.0) 6,910,267 3,640,380 (47.3)
Korombiya 1,037,040 333,465 (67.8) 9,844,591 3,155,193 (67.9)
Mudzimba Traffic 886,874 292,305 (67.0) 8,344,540 2,704,278 (67.6)
Yese Traffic 4,174,506 2,084,845 (50.1) 45,838,098 19,961,092 (56.5)
Mudzimba Traffic 2,899,572 1,590,163 (45.2) 29,039,750 13,400,976 (53.9)
Kubva munaKurume 16, 2020, hurumende dzakasiyana dzakapa zvirambidzo zvekubhururuka kumatunhu akasiyana epasi kudzora kubuda kwehutachiona hweCOVID-19. Nekuremekedza kwendege ASUR inoshanda:
Sezvakaziviswa munaKurume 23, 2020, kana Mexico kana Puerto Rico havana kuburitsa nendege, kusvika parizvino. MuPuerto Rico, iyo Federal Aviation Authority (FAA) yakagamuchira chikumbiro kubva kuna Gavhuna wePuerto Rico kuti dzendege dzese dzinoenda kuPuerto Rico dzinomhara kuLMM Airport, inoitwa neAURostar, uye kuti vese vanosvika vafambi vanoongororwa nevamiriri. weDhipatimendi Rezvehutano rePuerto Rico. Musi waKurume 30, 2020, Gavhuna wePuerto Rico, kuburikidza nehurongwa hwehutongi hwenguva isingaperi, akagadza kugara kwemavhiki maviri kune vese vafambi vanosvika kuLMM Airport. Naizvozvo, LMM Airport inoramba yakavhurika uye ichishanda, kunyangwe iine huwandu hwakadzikira hwekubhururuka uye huwandu hwevapfuuri.
Kuti uwedzere kusimbisa kudzora kwehutano pakusvika, kutanga muna Chikunguru 15, Gavhuna wePuerto Rico akatanga kuita zvinotevera zvinotevera matanho. Vatakuri vese vanofanirwa kupfeka maski, zadza fomu rinosungirwa rekuzivisa ndege kubva kuPuerto Rico Dhipatimendi Rezvehutano, uye vatumire mhedzisiro yakaipa yePCR mamorekuru COVID-19 bvunzo yakatorwa maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika kuti vadzivirirwe kwekuparadzaniswa kwevhiki mbiri. Vapfuuri vanogona zvakare kusarudza kutora iyo COVID-72 bvunzo muPuerto Rico (kwete hazvo panhandare yendege), kuti vasunungurwe kubva kwavanogara (zvinofungidzirwa kutora pakati pe19-24 maawa).
MuColombia, kutanga munaGunyana 1, 2020, nhandare dzinotevera dzakasimudza nendege dzekutakura vanhu pasi pechikamu chekutanga chehurongwa hwekubatanidza zvishoma nezvishoma hwakaziviswa neCivil Aviation Authority: José María Córdova muRionegro, Enrique Olaya Herrera muMedellín neLos Garzones kuMontería. Pamusoro pezvo, nhandare dzepaCarepa neQuibdó dzakatangazve kushanda munaGunyana 21, 2020, apo nhandare yeCorozal yakatangazve musi waGumiguru 2, 2020. Ndege dzenyika dzese dzinoenda kuColombia dzakatangazve musi waGunyana 21, 2020, kunyangwe paine hwaro hushoma, sechikamu chekumisazve zvishoma nezvishoma. Vanofamba nendege dziri kuuya dzenyika dzese vanofanirwa kuendesa zvisirizvo mhinduro yeECVID-19 bvunzo yakatorwa mukati maawa 96 kubva kwekuenda kwavo kuti vabvumidzwe kukwira ndege yavo uye kupinda munyika.
Pamusoro pezvo, traffic yevatakuri kuMexico yakakanganiswa neHurricane Delta, iyo yakarova Yucatan Peninsula sechikamu chechipiri dutu muna Gumiguru 2 na13, 14. Cancun Airport yakaramba yakavharwa kwemaawa gumi nematanhatu kutanga na2020: 16 masikati munaGumiguru 10 nepo Cozumel Airport yakavharwa kwemaawa makumi maviri nemaviri kutanga na00: 13 masikati pazuva rimwe chete. Musi waGumiguru 22, 5, iyo Yucatan Peninsula yakarohwa neHurricane Zeta, chikamu chechina dutu. Cancun airport yakaramba yakavhurika, nepo Cozumel Airport yakavharwa kwemaawa 00 kutanga na26: 2020 masikati muna Gumiguru 1.
nokuKuni Cancun 758,707 591,005 (22.1) 7,462,241 4,091,857 (45.2)
MID Mérida 220,763 100,394 (54.5) 2,104,421 957,346 (54.5)
pombi Tapachula 30,110 26,937 (10.5) 299,979 211,259 (29.6)
nokuKuni Cancun 1,011,657 419,731 (58.5) 13,682,731 5,452,097 (60.2)
MID Mérida 14,529 2,909 (80.0) 171,793 69,228 (59.7)
pombi Tapachula 637 667 4.7 10,932 6,010 (45.0)
Traffic Yese Mexico 2,478,834 1,365,772 (44.9) 28,262,695 12,914,498 (54.3)
nokuKuni Cancun 1,770,364 1,010,736 (42.9) 21,144,972 9,543,954 (54.9)
MID Mérida 235,292 103,303 (56.1) 2,276,214 1,026,574 (54.9)
pombi Tapachula 30,747 27,604 (10.2) 310,911 217,269 (30.1)
SJU Yese 658,632 385,608 (41.5) 7,730,812 3,891,401 (49.7)
Traffic Yakazara Colombia 1,037,040 333,465 (67.8) 9,844,591 3,155,193 (67.9)